AHOANA NY FIJERENA NY FIFANDRAISANA AMIN'NY KAONTY GOOGLE - GOOGLE - 2019
Ahoana ny fijerena ny fifandraisana amin'ny kaontinao google
Ny router an'ny ASUS, dia manamarika fiainana lava be. Na dia efa navoaka maherin'ny dimy taona lasa aza ireo modely momba ny fitondran-tena, dia afaka manatanteraka ny andraikiny anio, saingy tsy tokony hohadinointsika ny filàna ny faharetan'ny mikroprograma izay mifehy ny asan'ny fitaovana. Diniho ny fomba fampivoarana na famerenana ny famandrihan-drakitra ny ASUS RT-N10 router, ary koa ny famerenana ny rindrambaikon'ny orinasa momba ny fitaovana raha simba izany.
Mora ny mametaka ny Asus routers - ny mpamorona dia namorona fitaovana tsotra ho an'ny mpampiasa tsirairay mba hifehezana, ary nanatsotra ny fomba hanoloana ny firmware amin'ny dikan-teny iray amin'ny iray hafa araka izay azo atao. Amin'ity tranga ity dia mariho:
Ny zavatra rehetra voalaza etsy ambany dia azo avy amin'ny mpampiasa amin'ny alalan'ny fahamendrehany, amin'ny alahelony sy ny loza mety hitranga! Ny tompon'ilay fitaovana ihany no tompon'andraikitra amin'ny vokatry ny asa, anisan'izany ireo olona ratsy!
Raha ny tena izy, ny tontolon'ny RT-H10 ACCS dia tena tsotra ary maharitra minitra vitsy monja, fa mba hiantohana io toe-javatra io, ary koa mba hisorohana ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoana ao anatin'ilay dingana, dia ilaina ny manatontosa fampiofanana aloha. Hevero ny asam-barotra izay manome maimaim-poana ny famerenana maimaim-poana ny router firmware. Amin'izany fotoana izany dia afaka mianatra momba ireo teknika fototra ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny rindrankajin'ny rindrambaiko ireo mpampiasa izay manohitra ny vahaolana amin'ny olana voalohany.
Saika ny fanodikodinam-peo miaraka amin'ny router dia atao amin'ny fampiasana ny rindrin'ny fitantanana ny fitaovana (admin panel). Ny fidirana amin'ny paikan'ny fitantanana ny fitaovana dia azo avy amin'ny tranonkala Internet.
Sokafy navigateur ary midira ao amin'ny adiresy:
mpanao gazety "Enter" eo amin'ny klavisy, izay hitarika amin'ny fisehoan'ny varavarankan'ny fahazoan-dalana amin'ny alàlan'ny admin. hiditra "Admin" amin'ny sehatra roa sy tsindry "Login".
Vokatr'izany, mahazo miditra amin'ny aterineto amin'ny router ASUS RT-N10.
Araka ny hitanao, miditra amin'ny adiresy admin, dia tsy maintsy miditra amin'ny adiresy IP, login sy ny tenimiafina ianao. Raha toa ka niova ireo safidy ireo na ny iray amin'izy ireo ary tsy fantatra ny sanda (mety ho hadino) nomena azy ireo nandritra ny fametrahana ny fitaovana na nandritra ny fandidiana azy dia tsy miasa ny fidirana amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny router. Ny fomba niaingan'ny toe-javatra voalaza tetsy ambony dia ny famerenana tanteraka ny fitaovana amin'ny rafitra fanontana, izay horesahina etsy ambany, ary raha toa ka adinon'ireo login / password dia ity ihany no hany fomba. Fa mba hahafantarana ny adiresy IP an'ny router, raha tsy fantatra izany dia azonao atao ny mampiasa ny fitaovana rindrambaiko avy amin'ny ASUS - Finday ny fitaovana.
Ampidiro ny utility ASUS Device Discovery hamaritana ny adiresy IP mpanamboatra ny router
Mandehana any amin'ny pejy fanohanana teknika amin'ny fanohanana ara-teknika ASUS RT-H10 amin'ny rohy voalaza etsy ambony. Lisitra fisakanana "Azafady azafady OS" Misafidiana ny version Windows napetraka ao amin'ny PC.
Ao amin'ny fizarana "Asa vaventy" tsindrio ny bokotra "Download" mifanohitra amin'ny anaran'ny vola "ASUS Device Discovery", izay hitondra mankany amin'ny famoahana ny rakitra miaraka amin'ny kitapo fanapariahana ny utility ao amin'ny disk PC.
Esory ilay voaray ary alefaso miaraka amin'ny rakitra Discovery.exe, sokafy izany mba hanombohana ny fametrahana ny fitaovana.
klikayte "Next" ao amin'ny varavarankely voalohany amin'ny fametahana fametrahana alohan'ny famoahana rakitra.
Atombohy hatramin'ny farany ny fametrahana ny Asus Device Discovery ary tsindrio "Hatao" ao amin'ny varavaranky vita amin'ny installer, raha tsy mamafa ny bokotra "Manomboka ny fialana amin'ny fitaovana".
Ny utility dia manomboka automatique ary manomboka avy hatrany ny mijery ny tambajotra izay mifandray amin'ny PC noho ny fisian'ny ASUS fitaovana.
Rehefa hita ny RT-N10 ao amin'ny window ASUS Device Discovery, dia aseho ny anaran'ny router, ary mifanohitra amin'izany ny SSID, ny adiresy IP izay tadiavinao ary ny sarin'ny subnet.
Azonao atao ny manatona fahazoan-dalana ao amin'ny rindrambaiko admin amin'ny router rehefa hita ny soatoavin'ny paramètres mivantana avy amin'ilay fitaovana finday Device - mba hanaovana izany, tsindrio "Configuration (C)".
Vokatr'izany dia manomboka ny tranokala, mampiseho ny pejy fandraiketana eo amin'ny sehatry ny administratif.
Famerenana sy famerenana ny safidy
Ny zavatra voalohany asaina atao aorian'ny fampidirana ao amin'ny tranonkala ASUS RT-N10 dia ny mamorona rafitra iray ahafahana miditra amin'ny aterineto sy ny asan'ny tambajotra ao an-toerana. Ny fananana tohin'ny fanovana dia hamela anao hamerina haingana ny soatoavina, ary noho izany ny fampiasana ny tambajotra mifantoka amin'ny router, raha toa ka averina na tsy mety ny fitaovana.
Midira amin'ny sehatra admin. Mandehana any amin'ny fizarana "Administration"amin'ny fipihana ny anarany eo amin'ny lisitra eo ankavia.
Sokafy ny tablety "Famerenana / hamonjy / famindrana ny fikandrana".
Tsindrio ilay bokotra "Save", izay hitarika ny fametrahana rakitra iray ahitana fampahalalana mikasika ny fanalahidin'ny router amin'ny rakitra PC.
Rehefa vita ny fikarakarana ao amin'ny lahatahiry "Downloads" na ny lahatahiry voatondro ataon'ny mpampiasa amin'ny dingana teo aloha, dia hiseho ilay rakitra Settings.CFG - Izany no miverimberina amin'ny paikan'ny router.
Raha ilaina ny famerenana ny fananganana ASUS RT-H10 amin'ny ho avy:
Mandehana any amin'ny tabilao tokana izay namonjena ny backup ary tsindrio ny bokotra "Fidio ny rakitra"mifanohitra amin'ilay anarana safidy "Manavao ny fanovana".
Ampahafantaro ny lalana mankany amin'ny rakitra backup, afafazo ary tsindrio "Open".
Tsindrio ny bokotra "Alefaso"any amin'ny faritra "Manavao ny fanovana".
Miandrasa amin'ny famerenana ny famerenana indray ny paikady sy ny famerenana ny router.
Raha ny marina, ny tselatra dia tsy panacea ho an'ny fahadisoana rehetra amin'ny router ary tsy manome antoka fa ASUS RT-N10 aorian'ny fombafomba dia hiasa tsara araka izay ilainy. Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpitsikilo ny "fitondrantenan'ny" router dia ny famaritana tsy ara-drariny ireo mari-pamantarana ao anaty tambajotra manokana, ary mba hiantohana ny fampiharana ara-dalàna, dia ampy ny hamerenana ny fitaovana amin'ny rafitra ary hametraka azy indray.
Jereo koa: Ahoana ny fanomanana ny ASUS router
Ankoatra ny zavatra hafa, ary araka ny voalaza etsy ambony, ny famerenana dia afaka manampy amin'ny famerenana ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny sehatra fitantanana. Ny famerenana ny mari-pahaizana ASUS RT-H10 mankany amin'ny fari-piadanana dia azo tanterahina amin'ny fanarahana ny iray amin'ireo lalana roa.
Midira amin'ny aterineto ary midira "Administration".
Tsindrio ny bokotra "Ampodio"hita eo akaikin'ny anaran'ny asa "Fitaovana fanontana".
Ampitahao ny fangatahana tonga mba hanombohana ny dingan'ny famerenana ny fikirakirana ny router amin'ny fanjakana.
Andraso ny fizotran'ny ASUS RT-N10 sy ny famerenana azy.
Fitaovana Hardware "Ampodio".
Ampifanaraho amin'ny router ny hery ary alamino izany mba hahafahanao manara-maso ireo endriky ny LED eo amin'ny tontonana.
Miaraka amin'ny fanampiana fitaovana misy, ohatra, ny clips papiers voapetraka, tsindrio ny bokotra "Ampodio"eo an-damosin'ny router teo akaikin'ny connector "LAN4".
mihazona "Ampodio" mandra-pahatongan'ny famantarana "Power" eo am-baravaran'ny ACCS RT-H10 dia manomboka mameno, dia afoy ny bokotra reset.
Miandry ny fitaovana hanombohana, ary avy eo ny safidy rehetra dia haverina any amin'ny sanda arak'asa.
Ny rakitra misy ny dikan-teny samihafa amin'ny fikirakirana fikirakirana ASUS RT-N10 dia tokony hivoaka amin'ny tranonkala ofisialin'ny mpamokatra - dia manome toky fa ny fiarovana amin'ny fampiasana ny fomba fiasan'ny router dia atolotra etsy ambany ao amin'ny lahatsoratra.
Download firmware ASUS RT-N10 avy amin'ny tranonkala officiel
Midira ao amin'ny rindrambaiko admin an'ny router ary jereo ny isan'ireo fivoriambe napetraka ao amin'ny tontonana amin'ny fitaovana, mba hanohizana ny fandefasana ny daty famoahana ny firmware, ary koa hahafantarana raha ilaina ny fanavaozana. Ao an-tampon'ilay pejin-dehibe ao amin'ny interface no misy ny singa iray "Firmware Version" - Ireo tarehimarika voalaza eo akaikin'io anarana io dia manondro ny isan'ireo rindrambaiko rindrambaiko napetraka ao amin'ny fitaovana.
Sokafy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy eo ambany fampidirana ity boky ity, ny tranonkala ofisialy natsangana hanomezana fanampiana ara-teknika ho an'ny tompon'ny router ASUS RT-H10, ary tsindrio ny tabilao "Drivers and Utilities".
Ao amin'ny pejy misokatra, tsindrio "BIOS sy rindrambaiko".
Tsindrio ny rohy "Asehoy daholo ny rehetra"mba hahazoana ny lisitra feno amin'ny rakitra fikandrana azo alaina.
Misafidiana ny versione firmware ilaina amin'ny lisitra ary tsindrio "Download" ao amin'ny faritra misy ny fampahalalana momba ny rakitra nalefa.
Rehefa tapitra ny famoahana, esory ny fonosam-peo.
File extension * .trx, nahazo ny vokatry ny famoahana ilay fonosana nalefa tamin'ny tranonkala ofisialy, ary misy tontolon'ny fikolokoloana ho an'ny fitaovana.
Ny zava-manahirana rehetra tratra nandritra ny dingan'ny routers dia misy antony telo lehibe:
Ny famindrana ny data amin'ny router dia notanterahina noho ny fifandraisana an-tambazotra (Wi-Fi), tsy mendrika kokoa noho ny cable.
Ny famerenana ny famerenana ny fikandrana dia tapaka ny mpampiasa mba hamita.
Mandritra ny famerenana ny fahatsiarovana ny router, ny famatsiana herinaratra ho an'ny fitaovana sy / na PC dia tapaka ary ampiasaina ho fitaovana fikirakirana.
Noho izany, mba hiarovana ny ASUS RT-N10 amin'ny fahavoazana rehefa manavao ny firmware, araho ireto toro lalana ireto:
ampiasao ny tadim-paty mba hampidirana ny fitaovana sy ny solosaina mandritra ny dingana;
Aza manapaka ny dingan'ny firmware;
Ataovy antoka ny famatsiana herinaratra ho an'ny router sy PC (idealy, mampifandray ireo fitaovana amin'ny UPS).
Ahoana no hamafana ASUS RT-N10
Tsy misy afa-tsy fomba roa miompana amin'ny fikirakirana ny modely ho an'ny router. Ny voalohany dia ampiasaina rehefa mila manavao na manodina ny rindrankajy firmware, ary ny faharoa dia tokony ampiasaina raha simba ny rindrambaotin'ny router ary mila averina amin'ny laoniny. Ireo safidy roa ireo dia mahakasika ny fampiasana rindrambaiko ofisialy nomen'ny mpanamboatra.
Fomba 1: Fanavaozana, fanodinana, ary fanavaozana ny firmware
Ny fomba ambaran'ny ASUS RT-H10 fikirakiran'ny mpandraharaha, izay notaterin'ny tompon-daka tamin'ny fomba ofisialy, dia ny fampiasana fitaovana iray ahafahan'ny interface-ny router ampiasaina ary mety tsara amin'ny fampiasana azy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Na inona ny dikan-teny fikirakirana napetraka ao amin'ny fitaovana ary inona no angatahan'ilay mpampiasa hanamboatra ny router - ny zavatra rehetra dia vita amin'ny fanatanterahana ireto dingana manaraka ireto.
Sokafy ny pejy panetanana admin ary midira. Mandehana any amin'ny fizarana "Administration".
Tsindrio "Firminware Update".
Sokafy ny varavarankely mba hisafidianana ny rakitra fikandrana hapetraka ao amin'ny RT-N10 amin'ny tsindrio "Fidio ny rakitra" akaikin'ny toerana "Fitaovana fikirakirana vaovao".
Ampahafantaro ny lalana mankany amin'ny orinasa maimaim-poana avy amin'ny tranonkala mpamokatra, mifidiana ny rakitra * .trx ary tsindrio "Open".
Raha te hanomboka ny dingan'ny fanoratana indray ny fahatsiarovana ny router miaraka amin'ny angona avy amin'ny rakitra fikandrana, kitiho ny bokotra "Alefaso".
Miandrasa ny fametrahana ny firmware mba hamitana azy, izay matetika no arahin'ny baran'ny fandrosoana vita.
Tsara homarihina fa tsy amin'ny toe-javatra rehetra dia misy ny mari-pamoiran'ny fandrosoana ao amin'ny pejy interface. Raha toa ka tsy hita maso ny fizotran'ny fanoratana ny tsiaro-flash ary ny "panel" amin'ny "admin" dia toa "mangatsiaka" mandritra ny fikarakarana, tsy tokony handray andraikitra ianao, miandry fotsiny! Rehefa afaka 5-7 minitra dia avereno ny pejy ao amin'ny browser.
Amin'ny fotoana faran'ny fanamafisana ny router dia manomboka automatique. Ny tranonkala dia maneho ny sehatry ny administratif an'ny ASUS RT-H10, izay ahafahanao manamarina fa niova ny fandefasana firmware. Mandehana amin'ny fampiasana ny fahaizan'ny router, miasa eo ambany fanaraha-maso ny firmware vaovao.
Fomba 2: Famerenana amin'ny laoniny
Mandritra ny fizotran'ny routers, ary na dia mihoatra noho izany aza ny fizotran'ny fampidiran-tserasera amin'ny sehatry ny rindrambaiko, dia tena tsy fahita firy izany, fa mitranga isan-karazany. Vokatr'izany dia mety ho simba ny fikandrana izay manara-maso ny asan'ny fitaovana, izay mitarika ho amin'ny tsy fahaizan'ny fitaovana manontolo. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny filàna ny hamerenana ny firmware.
Soa ihany, Asus dia nikarakara ireo mpampiasa ny vokatra avy aminy, anisan'izany ny RT-N10 modely, izay mamorona fitaovana tsotra ho an'ny fanatanterahana ny paik'ady ho an'ny fanarenana indray ny tontolon'ny fako. Ny fanafody dia antsoina ASUS Firmware Restoration ary azo alaina maimaim-poana ao amin'ny pejy fanohanana teknika RT-N10:
Download ASUS Firminware famerenana amin'ny tranonkala ofisialy
Afaho, atsangano ary hazavao ny ASUS Firmware Restoration:
Mandehana any amin'ny tranonkalan'ny ASUS amin'ny rohy etsy ambony ary sokafy ny fizarana "Drivers and Utilities".
Misafidiana ao amin'ny lisitry ny fanesorana ny OS OS izay mitantana ny solosaina ampiasaina ho fitaovana fanarenana.
Fampitandremana! Raha manana Windows 10 ianao, dia lazao ao amin'ny lisitra "Windows 8.1" mifanaraka amin'ilay bit "installé" folo. Noho ny antony tsy fantatra, ny famerenana fiarovana Firmware dia tsy ao anatin'ny sehatra utilities ho an'ny Windows 10, fa ny version ho an'ny G-8 dia miasa amin'ny tontolo manodidina ny OS taloha rehefa ilaina izany!
Tsindrio ny rohy "Asehoy daholo ny rehetra"monina eo ambonin'ny faritra "Asa vaventy".
Mba hanombohana ny fampidinana ny famerenana famerenana amin'ny router, tsindrio ny bokotra. "Download"ao amin'ny faritra misy ny famaritana ny toerana "ASUS RT-N10 famerenana fiarovana firma 2.0.0.0".
Rehefa vita ny famoahana dia alamino ny arisiva vokatr'izany. Ny vokatra dia ordinatera. "Rescue_RT_N10_2000". Sokafy ity lahatahiry ity ary ataovy ny rakitra. "Rescue.exe".
Tsindrio "Next" ao amin'ny varavarankely voalohany sy telo manaraka ny fametrahana ny installer.
Miandrasa amin'ny famindrana ny rakitra fampiharana ao amin'ny rakitra PC ary tsindrio avy eo "Hatao" ao amin'ny varavarankely farany amin'ny mpikarakara fametrahana, nefa tsy voamarina "Famerenana ny famerenana indray ny famerenana ny fiarovana".
Ny fampidirana dia manomboka automatique, mandehana amin'ny dingana manaraka.
Raiso ny raki-drakitra ao amin'ny Firmware Restoration:
Tsindrio "Review (B)" ao amin'ny varavarankely.
Ao amin'ny fikandrana fanalahidy dia mametraha ny lalana mankany amin'ny rindrankajy maimaim-poana avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny ASUS. Asongadino ny rakitra tgz ary tsindrio "Open".
Ampitao amin'ny ASUS RT-N10 ny fomba "Recovery" ary ampifandraiso amin'ny PC:
Esory daholo ny cable rehetra amin'ny router ary tsindrio ny bokotra mampiasa fitaovana misy. "Ampodio" eo an-damosin'ilay fitaovana. Mitana ilay fanalahidy "Famerenana amin'ny laoniny", mifandray amin'ny hery router.
Afaho ilay bokotra "Ampodio" indraindray "Power" mamirifiry tsikelikely. Ity fihetsika ity dia manondro fa ny router dia ao amin'ny fomba fanarenana.
Mifandray amin'ny iray amin'ireo connecter "LAN" amin'ny router patch router mifandray amin'ny connecteur RJ-45 eo amin'ny ordinateran'ny ordinatera.
Avereno ny tontonana:
Ao amin'ny fikandrana fiarovana Firmware, tsindrio "Download (U)".
Miandrasa mandra-pahatongan'ny rakitra fikirakirana dia alefa any amin'ny fahatsiarovan'ny router. Ity dingana ity dia automated ary ahitana:
Famantarana ny router mifandraika;
Download ny rakitra fikandrana amin'ny fitaovana;
Asongadio ny fahatsiarovana ny router.
Rehefa vita ny fikarakarana dia hisy fampandrenesana momba ny fampivoarana ny fikirakirana mahomby ao amin'ny fikandrana Firmware, dia azo atao ny manidy ny utility.
Ny ASUS RT-N10 naverina naverina indray dia hiverina indray. Azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny admin ary manamboatra ny router.
Noho izany, ny fampiasana rindram-baiko ofisialy novolavolan'i ASUS dia mahatonga azy ireo ho mora ny mamerina mamerina indray ny router RT-N10 ary hamerina amin'ny laoniny ny asany na dia misy tranganà rindrambaikon'ny rafitra aza. Araho tsara ireo torolalana ary vokatr'izany dia mahazoa foibem-pahefana ao an-tranonkala!
Resaho amin'ny Mozilla Firefox
Tsindrio ny mailaka ao amin'ny Outlook
Famoronana adihevitra amin'ny VK
Windows 10 sary famantarana
Ahoana ny fanontana dossier PDF
Tsy azo atao ny mampiasa ny rafitra router amin'ny serasera raha tsy misy fitaovana fikirakirana mifanaraka aminy. Ny mpanamboatra dia manoro hevitra amin'ny fampiasana ny safidy rindrankajy farany, satria ny fanavaozana dia tsy mitondra fanitsiana fahadisoana fotsiny, fa koa ny endri-javatra vaovao. Eto ambany eto dia hanambara aminao ny fomba hakana ny firmware vaovao amin'ny D-Link DIR-300 router. Read More
Ampitao haingana ny Internet amin'ny Windows 7
Fandaharanasa fanitsiana diso ao amin'ny lahatsoratra
https://termotools.com mg.termotools.com © Google 2019